Igumbi 301, kunye neendawo zokusebenza ngokubambisana kwisixeko saseOkawa.
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguKeihiro
UKeihiro unezimvo eziyi-57 zezinye iindawo.
Yindlu enye enemigangatho emi-3 kunye nophahla. Umoya-moya. Kukho igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese kwi-2&3F. Kukho ibhafu kunye nekhitshi le-IH kwi-2F. Unokusebenzisa ifriji, kodwa nceda ulumkele ukutya okanye ukusela izinto zabanye. Iphakathi embindini. Ivenkile elula ngeenyawo kwi-1 min. Indawo yokupaka yasimahla ifumaneka ngemizuzu emi-2 ngeenyawo. I-WiFi iyafumaneka. Kukho iwasha yodidi lwegubu / isomisi kwi-3F, Ngexesha elinye 100 yen.
Kukho izinyuko zangaphandle ukusuka kumgangatho wokuqala ukuya eluphahleni ngoko ke akukho ngxaki nokuba ugoduka ebusuku kakhulu. Kukho izinyuko zangaphakathi kwi-2F kunye ne-3F. Uphahla luyindawo yeBBQ. Kusetyenziswa iiroyali ezahlukeneyo. Imidiza kufuneka ibe kwizinyuko zangaphandle okanye i-1F kwindawo yokutshayela okanye phezu kophahla.
Yeyona dolophu inkulu yamaplanga eJapan, indibano yeshishini langaphakathi, isixeko saseOkawa. Kukho ibhulorho ekhulayo yesizwe echongiweyo iasethi ebalulekileyo yenkcubeko ngemizuzu emi-3 ngemoto. Kukho "umda we-Kobo / Enoku clan" apho ubume besixeko bexesha le-Edo buhlala kumgama wokuhamba. Zininzi kakhulu iivenkile zokutya ezingabizi kakhulu nezimnandi.
Umbuki zindwendwe ngu- Keihiro
Ndisebenza kwindawo yokusebenzela ye-1F emini. Ndiyakwazi ukuphendula ifowuni kunye ne-SNS ngexesha lasemini. Kulula ukubonisana. Ndisazi kakuhle isixeko sase-Okawa.
Inombolo yomthetho: M400005699
Iilwimi: English, 日本語, Português